Ravelojaona Andry La Pie Ampy izay ny fanakorontanana ny rugby Malagasy
Fifidianana tsy nanaraka ny ara-dalàna iny notontosaina teny Ivandry tamin’ny talata 6 febroary 2018 teo iny ka nahalany an-dRazafimbelo Norbert ho filohan’ny ligin’Analamanga rugby ihany koa, hoy Ravelojaona Andry La Pie filoha am-perinasan’ny ligy.
Famotehana an’ity tontolo ity ireny ary ireo mpitantana taloha efa namotika ihany ireo, toy ny filohan’ny Malagasy Rugby sy ireo filohana seksion’ny rugby Andrefan’Iarivo, Avaradrano ary Atsimondrano. Ambarako amin’ny mpitia rugby rehetra, hoy Andry La Pie, fa tsy misy ligin’Analamanga rugby roa samihafa izany fa 4 taona no nifidianana anay ka vao 2 taona sy tapany izay no lasa. Koa mbola miantso an’ireo seksiona 3 voalaza teo ireo ny tenako hanao tatitry ny zava-bita tokony hataon’izy ireo aty amin’ny ligy fa ho avy tsy ho ela ny fivoriambe hataonay ato amin’ny ligy. Voatery handray fanapahan-kevitra ho azy ireo izahay raha … Mitohy ny fifaninanana ho an’ny Ligin’Analamanga rugby tarihako ary ho an’ireo seksiona miaraka aminay (Antananarivo-Renivohitra sy Vakiniadiana), hoy i Andry La Pie, ary misokatra midanadana ho an’ireo fileovana maniry ny te hilalao aty aminay ny varavarana ka mandray azy ireo an-tanan-droa izahay.